Wed, Nov 13, 2019 at 7:54pm
मंगलवार, ३ आषाढ २०७६,	–काशीराम शर्मा.	1.45K
बाँके, ३ असार
बाँकेको विकट बघौडा क्षेत्रका जनताको दुई दशकदेखिको बिजुली बत्ती बाल्ने सपना अझै पछाडि धकेलिएको छ । राप्तीपारिका सिङ्गो नरैनापुर गाउँपालिका र राप्तीसोनारी गाउँपालिकाका धेरै वडा विद्युत् सेवाबाट वञ्चित छन् । यो विद्युतीकरणबाट राप्तीसोनारीका झण्डै ६० हजार र नरैनापुरका ३५ हजार जनताले प्रत्यक्ष लाभ लिने छन् ।
विद्युत् प्राधिकरणको क्षेत्रीय कार्यालयले ठेकेदारले काममा लापरवाही गरेको जनाएर ठेक्का रद्द गरिदिएपछि राप्तीपारिको विद्युतीकरणमा थप अन्योल सिर्जना भएको छ । राप्तीसोनारी र नरैनापुर गाउँपालिकामा एक दशकअघि विद्युतीकरण शुरु भएको हो ।
“आशा निराशामा बदलिएको छ । दशकदेखिको बिजुली बाल्ने सपनामा सकिएको छ ।”
राप्तीसोनारी–५ टडुवाका रामलौटन चौधरीलाई त अब विद्युत् आउला भन्ने आश पनि मरिसकेको छ । “खै आउँछ कि आउँदैन ? मलाई त आउँछ भन्ने विश्वास छैन,” उहाँले भन्नुभयो – ‘ठेकेदारको बदमासीले काम रोकिएको भन्ने सुनेको छु । यो छिट्टै टुङ्गो लगाउनुप¥यो ।” नरैनापुर गाउँपालिकाका बासिन्दाले १० वर्षदेखि यस्तै गुनासो गर्दै आएका छन् । उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगञ्ज इजलासको ‘स्टे अर्डर’ पछि काम रोकिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भयो, रुख पनि काटिए, खम्बा पनि ठड्याउन शुरु भयो तर, ठेकेदारले काम नै नगरेपछि ठेक्का तोड्न बाध्य भयौं
गत वैशाख २४ गतेदेखि ठेक्का रद्द भयो । “चैत्र मसान्तसम्म काम सक्न समयसीमा दिएका थियौं,” क्षेत्रीय प्रमुख सिंहले भन्नुभयो – “तर, फिल्डमा काम भएको पाएनौं ।” प्रसारण लाइन निर्माण क्षेत्रमा ९३० वटा खम्बा ठेकेदारले गाड्नुपर्नेमा ३०० वटा मात्रै गाडिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
ठेकेदारसँगको सम्झौता तोडेपछि काम नयाँ ढङ्गले शुरु गरेको क्षेत्रीय प्रमुख सिंह बताउनुहुन्छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण नेपालगञ्ज वितरण केन्द्रले पनि छुट्टै विद्युतीकरणका लागि काम अघि बढाएको केन्द्र प्रमुख रामदुलार यादवले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार प्राधिकरणले झण्डै रु ५६ लाखमा नरैनापुरको बुद्धचोक क्षेत्रमा खम्बा ठड्याउने र तार लगाउने काम शुरु गरेको छ ।